Wasiirka amniga gudaha ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle oo maanta xariga kajaray Saldhig cusub ee Booliiska Degmada Cadale - Bandhiga Media
Wasiirka amniga gudaha ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Md; Maxamed Cabdiraxmaan kheyre ayaa Maanta Xarigga ka jaray Saldhigga Booliska Degmada Cadale oo dib u dayac-tir ballaaran lagu sameeyay.
Dib u dhiska iyo dayac-tirka ay Wasaaradda amniga Hirshabeelle ku sameysay Saldhigga Degmada Cadale ayaa waxaa Gacan ballaaran ka geystay hay’adda IOM iyo AMISOM, sida uu Warbaahinta u sheegay Wasiirku.
Wasiirka ayaa ugu mahad-celiyay IOM kaalinta ballaaran ee ay ka qaadatay horumarinta kaabayaasha Dowladda oo ay ugu horreeyaan dhsimayaasha Xarumha muhiimkau u ah Hirshabeelle.
“Waxaa marka hore u mahadcelinayaa hay’adda IOM oo runtii si weyn isagu howshay horumarinta adeegyada muhiimka u ah Hirshabeelle, xaqiiqdii sharaf iyo farxad ayay innoo tahay in Maanta aan si rasmi ah u daah-furno Saldhigga cusub ee Degmada Cadale oo loogu adeegi doono Bulshada ku nool halkan” ,ayuu yiri wasir Kheyre.
Saldhiggan cusub ee ay yeelaneyso Degmada Cadale waxaa ku shaqayn doona Booliiska Dowlad Goboleedka Hirshabeelle oo ay taageerayaan Ciidamada AMISOM.
Wasaaradda amniga gudaha ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa in dhowaalaba wadday dar-dar gelinta dhismaha iyo dib u dayac-tirka Saldhigyada degaannada Hirshabeelle, si uu maamulku wax uga qabto hanashada nabad-gelyada iyo fulinta baahiyaha kala duwan ee Bulshada.